KTM Duke-based ပြိုင်ပွဲလမ်းကြောင်းဆိုင်ကယ်စီးပြိုင်ပွဲစူးစမ်း! – Overdrive | သတ်မှတ်ချက်များနှင့်အတူမော်တော်ဆိုင်ကယ် catalog, ရုပ်ပုံများ, ratings, ပြန်လည်သုံးသပ်ခြင်းများနှင့် discusssions
နေအိမ် → KTM → KTM Duke-based Supermoto Spied! - Overdrive
19 ဇွန် 2015 | စာရေးသူ: dima | ဟာ Off comments on KTM Duke-based ပြိုင်ပွဲလမ်းကြောင်းဆိုင်ကယ်စီးပြိုင်ပွဲစူးစမ်း! – Overdrive
KTM Duke-based ပြိုင်ပွဲလမ်းကြောင်းဆိုင်ကယ်စီးပြိုင်ပွဲစူးစမ်း!
ရှင်းရှင်းလင်းလင်း KTM Duke ပလက်ဖောင်းပေါ်အခြေခံပြီးတစ်ဦး supermotard ၏ဤပုံရိပ်တစ်ခုဥရောပ KTM ဖိုရမ်အပေါ်ပေါ်ထွန်း. KTM CEO Stefan Pierer has often spoken of the company’s plans with Bajaj Auto revealing the nakeds (already out), the sports bikes (coming to Auto Expo most likely) and the enduro bikes (likely late 2014 or early 2015). Butasupermotard has never been mentioned.
ဒူဘိုင်း: အဆိုပါပြပေးနှင့်အတူပေါ်အပြည့်အဝ – KTM Middle East official launch…
KTM 50 ပြိုင်ပွဲလမ်းကြောင်းဆိုင်ကယ်စီးပြိုင်ပွဲ
20.06.2015 | ဟာ Off comments on KTM 450 အမိန့်ချီတက်ပွဲပုံတူရှိနိုင် – မော်တော်ဆိုင်ကယ်ယူအက်စ်အေ
20.06.2015 | ဟာ Off comments on ပထမဦးစွာရလဒ်ပြသမှု: 2005 KTM 125 SX နှင့် 250 SX – Transworld Motocross
19.06.2015 | ဟာ Off comments on KTM 350 နှင့် 450 SX-F ကို – သံသရာ torque မဂ္ဂဇင်း
19.06.2015 | ဟာ Off comments on 2010 KTM 300 XC-W ဆန်းစစ်ခြင်း –
19.06.2015 | ဟာ Off comments on KTM ရောင်းတော်မူမည် 2013 690 Duke ပြီးတော့ 990 မြောက်အမေရိကခုနှစ်တွင်စွန့်စားမှုဘာဟာ & Models
19.06.2015 | ဟာ Off comments on စက်ဘီး, အစိတ်အပိုင်းများ, ပစ္စည်းများ, ဝန်ဆောင်မှု, အားလုံး Ducati အပေါ်သတင်းများ, KTM နှင့် Husaberg…
19.06.2015 | ဟာ Off comments on 2012 KTM 450 SX-F ကိုစက်ရုံ Edition ကို- ရလဒ်ပြသမှုကိုပြန်လည်ဆန်းစစ်ခြင်းစီးနင်း
19.06.2015 | ဟာ Off comments on 2009 KTM 990 ထိပ်တန်းမြန်နှုန်း @ ပြိုင်ပွဲလမ်းကြောင်းဆိုင်ကယ်စီးပြိုင်ပွဲ T ကမော်တော်ဆိုင်ကယ်ပြန်လည်သုံးသပ်
Aprilia Mana 850 တစ်ဦးဆိုင်ကယ်ဟွန်ဒါအတွက် Harley-Davidson XR 1200 ခံယူချက် Brammo Enertia ဆူဇူကီး B-ဘုရင်ကနောက်ဆုံး prototype KTM 125 ပြိုင်ပွဲ Concept ကို တော်ဝင် Enfield Bullet 500 ဂန္ထဝင် ဆူဇူကီး B ကိုဘုရင်က Concept ကို သင်္ဘော MV Agusta 1100 Grand Prix Ducati Diavel ဆူဇူကီး AN 650 Bajaj Discover မော်တော်ဆိုင်ကယ်ဟွန်ဒါအိပ်မက်ကလေးများ Dokitto Ducati 60 အိန္ဒိယကာကွယ်ရေးဦးစီးချုပ် Classic ဆူဇူကီး Colleda CO ဟွန်ဒါ Goldwing ရှေ့ပြေးပုံစံ M1 စက်ဘီး Kawasaki ရင်ပြင်လေး ဟွန်ဒါ DN-01 အလိုအလျောက်အားကစား Cruiser Concept ကို Moto Guzzi 1000 Daytona Injection စမတ် eScooter စက်ဘီး Kawasaki ER-6n ဟွန်ဒါ X4 အနိမျ့ Down ဟွန်ဒါ DN-01 Ducati Desmosedici GP11